ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၈-၇-၂၀၁၃)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၈-၇-၂၀၁၃)
- ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ကို ရှေ့နေကွန်ရက် တရားစွဲမယ် click
- နိုင်ကျဉ်းလက်ကျန် စိစစ်ရေး ညှိနှိုင်း click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၁၅ ဦး ကျန်ရှိ click
- ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့ လေ့လာသုံးသပ် click
- သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေကြမ်း နည်းလမ်းသစ်ဖြင့် တင်သွင်းမည် click
- ညှိနှိုင်းမှုမရသေးတဲ့ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး ဥပဒေ (မေးမြန်းခန်း) click
- ဘာသာရေးအစွန်းရောက်သည့် ရန်လိုမှုများကို တိုက်ဖျက်သွားရန် အစိုးရ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် click
- ဆရာတော်ဦးဝီရသူတရားပွဲ ဗုံးကွဲမှုနဲ့ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာရေးကော်မတီ (တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း) click
- အင်တာနက်တွင် ပျံ့နေသော လက်နက်ကိုင်စစ်သင်တန်း ဓာတ်ပုံများမှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မြေပေါ်တွင် မဟုတ် click
- ရာသီဥတုကြောင့် ရွှေဂက်စ်ဖွင့်ပွဲသို့ ဒု-သမ္မတ မတက်ရောက်နိုင် click
- ရာသီဥတုဆိုးရွားမူကြောင့် ဂတ်စ်ပိုက်လိုင်း ဖွင့်လှစ်မည့် ဒု-သမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်း၏ ကျောက်ဖြူခရီးစဉ် ဖျက်သိမ်း click
- ကြေးနီစီမံကိန်းမှာ ဒေသခံတွေကို အလုပ်သစ်တွေပေးသွားမည်ဟု ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ကတိပေး (ရုပ်သံ) click
- တောင်သူတွေ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုယ် ကာကွယ်တတ်အောင် သင်တန်းပေး click
- လယ်သမားတွေ လယ်ပိုင်ရဖို့ - လင်းလက်ကြယ်စင် (အသံ) click
- လယ်သမားတွေ ဒုက္ခမရောက်မယ့် ဆန်စပါးမူဝါဒတွေ ချမှတ်သင့်ဟု ဒေါက်တာဇော်ဦး ပြော (ရုပ်သံ) click
- တံဆိပ်ခေါင်းခွန် လျှော့ချပေးဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်ပြမည် click
- ကော့မှူးမှာ ရွေ့လျားစာကြည့်တိုက် ဖွင့်လှစ် click
- တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် ပညာရည်မြှင့်တင်ကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း click
- လျစ်လျှူ မရှုသင့်တော့တဲ့ မြန်မာပြည် အခြေခံပညာရေး (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည် (အသံ) click
- အစိုးရနဲ့ ပလောင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး ဇူလိုင် ၃၁ မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမယ် click
- ရခိုင်ပါတီသစ် သြဂုတ်လမှာ မှတ်ပုံတင်မယ် click
- ရေမွန်မက်ဆေးဆေးဆုရ ပထမဆုံး ကချင်အမျိုးသမီး လဖိုင်ဆိုင်းရော်နှင့် မေးမြန်းချက် click
- အင်တာနက်နှေးကွေးမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကွန်ပြူတာနည်းပညာရှင်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် click
- အင်တာနက် တိုးတက်မှုနဲ့ အနှုတ်လက္ခဏာ - အပိုင်း (၈) click
- သပြေဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် click
- ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုခေါင်းဆောင် ၂ ဦး (ဆောင်းပါး) click
- အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက် ပုခုံးထမ်းရုန်းကြဖို့ဆိုတဲ့ ကိုမင်းဇေယျနဲ့ စကားလက်ဆုံ - ၁ (အင်တာဗျူး) click
- အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက် ပုခုံးထမ်းရုန်းကြဖို့ဆိုတဲ့ ကိုမင်းဇေယျနဲ့ စကားလက်ဆုံ - ၂ (အင်တာဗျူး) click
- ၈၈ တို့ ဘယ်သွားမလဲ (ဆောင်းပါး) click
- ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် (သို့မဟုတ်) အရေးတော်ပုံတပ်သား - ၁ (ဆောင်းပါး) click
- ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် (သို့မဟုတ်) အရေးတော်ပုံတပ်သား - ၂ (ဆောင်းပါး) click
- ကျနော်နှင့် မစုစုနွေး (ဆောင်းပါး) click
- သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ ပြည်တော်ပြန်ခရီးစဉ် (၁၁) click
- သက်ရှိပန်းချီ - အပိုင်း (၇) click
- ဘုန်းကြီးတွေလည်း … လှုပ်လှုပ်ရှားရှား (ဆောင်းပါး) click
- အောင်ပွဲ (ဆောင်းပါး) click
- မြန်မာများ နင်းပြားဘ၀က ထွက်နိုင်ရေး (ဆောင်းပါး) click
- ရခိုင်တွင် မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်း၍ ရေကြီးပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြတ်တောက် click
- မင်းပြားမြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာ၂၄ ရွာလောက် ရေလွှမ်းမိုး click
- ငဝန်မြစ်ရေကြီးမှု ငသိုင်းချောင်းမှာ မြစ်ကမ်းနံဘေး နေအိမ်တွေ ပြိုကျ click
- မယ်ဖာလုံမြို့နယ်မှာ ဘတ်ခြောက်သန်းဖိုး စိတ်ကြွဆေးပြားနဲ့ လက်နက်တွေ မိ click
- မြန်မာပြည်တွင် မာစီဒီးကား မိတ်ဆက်၊ ဒီဇင်ဘာတွင် အရောင်းပြခန်းနှင့် ဆားဗစ်စင်တာ ဖွင့်မည် (ရုပ်သံ) click
- ကိုကာကိုလာရဲ့ ရောင်းအားမြှင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းခရီးစဉ် ရန်ကုန်မြို့တွင် စတင် (ရုပ်သံ) click
- ဘုရင်ညီဂူ (ရုပ်သံ) click
- Public Voice - July 28 2013 (ရုပ်သံ) click
- Beyond Technology - Yatanarpon Call Center (ရုပ်သံ) click
- ကရဝိတ်ဖောင်တော် (ဆောင်းပါး) click
- ဖေဖေ့အကြောင်း (၉) click
- ဘောလီဘော နှစ်သင်းကို လေ့လာခြင်း click
- လစ်ဗျားအကျဉ်းသား ၁,၀၀၀ ကျော် ထောင်ဖောက်ပြေး click
- ဘန်ဂါဇီ အကျဉ်းထောင်ဖောက်မှု ဖြစ်ပွား click
- အီဂျစ်ဆန္ဒပြမှု သေဆုံးသူ များလာ click
- အီဂျစ်ပဋိပက္ခ သေဆုံးသူ များပြား click
- အီဂျစ်အကြမ်းဖက်မှု သေဆုံးသူ ၆၅ ယောက် ရှိသွားပြီ click
- လုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ တူနီးရှားအတိုက်အခံကို သင်္ဂြိုဟ် click
- တူနီးရှားပါလီမန် ဖျက်သိမ်းဖို့ ဆန္ဒပြသမားတွေ တောင်းဆို click
- ကိုရီးယားစစ်ပြေငြိမ်း အနှစ် ၆၀ ပြည့် ဆင်နွှဲ click
- ကိုရီးယားစစ် ရပ်ဆိုင်းခဲ့တဲ့ နှစ် ၆၀ ပြည့် အခမ်းအနား click
- တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယား နယ်စပ်မျဉ်းတနေရာ (ရုပ်သံ) click
- ကမ္ဘောဒီးယား မဲပေးပြီး အမှတ်အသား မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပြန်ဖျက်နိုင် click
- ကမ္ဘောဒီးယား ရွေးကောက်ပွဲ ဒီကနေ့ မဲပေးကြမယ် click
- အမေရိကန်မှာ ခေတ်စားလာတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားလူကြုံအငှားယာဉ်စနစ် click
အင်တာနက် connection က အရမ်းနှေး နေလို.
(ရုပ်/သံ) ဖေါ်ပြတာတွေ သိပ်မလုပ်ပါနဲ. ။
ဆောင်းပါး (စာ) တောင် အနိုင်နိုင် ဖတ်နေရတာဖို. ၊
ပင်လယ်ရေအောက်က ကိုငမန်း ကိုက်ဖြတ်သွားတဲ.
အင်တာနက် သွပ်နန်းကြိုး ပြန်ဆက်ပြီးလည်း
ပုဂ္ဂိုလ် ကြီးတွေက နှေးအောင် Adjust လုပ်ကြအုန်းမှာ ။
စည်ပင်ကော်မတီ က For Show ဖြစ်နေတယ်။
တိုင်းညွှန်မှူးနဲ့ အမှူဆောင်အရာရှိ စားဖားတွေကြားက ဘော်လီဘော ဘော့
လုံးလေးဖြစ်နေတယ် သမ္မတရုံးက ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ ကတည်းက
ညွှန်ကြားသော်လည်း အာဏာရှင် စားဖား ညွှန်မှူးတွေ ပဲ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပေါင်း
ပြီး ဆုပ်ကိုင်ထားတယ် မဖြစ်သင့်ပါဘူး။